Ekrem İmamoğlu: Mashruuca Dhismaha Kanal İstanbul? - RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulEkrem İmamoğlu: Mashruuca Dhismaha Kanal İstanbul?
11 / 12 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, wuxuu ka hadlay "Naval Workshop" "oo lagu qabtay sanadguurada 564-aad" Tersane-i Amire kuruluş. Isaga oo soo bandhigaya fikradihiisii ​​mashruuca "Kanal Istanbul", ayuu yidhi Imamoglu, "Waligeey noloshayda Ibliis damiir ma leh. Waxaan ka hadlaynaa, bro. Hal qof ayaa iga dhaadhicin kara, bro. Sayniska iyo caqliga ayaa iga qancin doona. Kama daba socdo wax kastoo sayniska iyo sababtu been u sheegaan. Dadkeenu ma tagi doono, ayuu yidhi. İmamoğlu wuxuu tusaale u soo qaatay xiriirka kirada Kanal Istanbul ereyadan: “Ma ogtahay waxa ay markii hore aheyd? Waxay ahayd mashruuca 3 jasiiradood oo ku yaal Marmara. Ka qodista halkaas, Bakirkoy, Avcilar waxaa lagu dhisi doonaa jasiiradaha Büyükçekmece 3 hortiisa. Miyaan wax intaas ka badan kuu sheegayaa? BİMTAŞ waxay ku jirtaa shirkaddeena. Mashaariicda ayaa la bartay, tuulooyinka ayaa la saaray jasiiradan, waxaana mashaariicda lala sameeyay tuulooyinkaas lagu soo bandhigay laguna soo bandhigay carwooyinka guryaha reer Yurub iyo carwooyinka caalamiga ah ee guryaha. Waa maxay? Waxaan ka iibin doonnaa tuulooyinka jasiiraddan 2-3 milyan oo doolar. Eeg baahiyaha Istanbul .. Ya
Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul (IMM) ayaa soo qaban qaabisay "Aqoon-isweydaarsiga Deniz" sannad-guuradii 564-aad ee "Tersane-i Amire kuruluş. Wadooyinka Magaalada Inc. Dhamaan daneeyayaasha qaybta ayaa kaqaybqaatay aqoon isweydaarsiga oo lagu abaabulay Haliç Shipyard oo uu martigaliyay Agaasimaha Guud. Khudbaddii ugu horreysay waxaa sameeyey Şehir Hatları A.Ş. Maareeyaha Guud Sinem Dedetaş. Kadib Dedetaş İmamoğlu wuxuu qaatay makarafoonka. Isagoo ka warramay muhiimadda ay leedahay Maraakiibta Haliç halkaasoo lagu qabtay munaasabaddan, İmamoğlu wuxuu yidhi, "Tani waa mid ka mid ah howlihii uu Fatih Sultan Mehmet aasaasay ka dib laba sano oo guul ah oo ina keentay Istanbul qadiimiga ah. Mar labaad, waxaan isaga ku xusuusineynaa mahadnaq. Si kale haddii loo dhigo, waxaan joognaa Suuqa Dahabiga ah ee Dahabka ah halkaas oo aan ku noolnahay sannadguuradii 564-aad. Waxaan joognaa garoonkii ugu da'da weynaa dunida, mid ka mid ah dhismayaashii ugu horreeyay ee Dhismaha Istanbul kadib guushii. ”
"Bosphorus waa mid ka mid ah nimcooyinka adduunka ugu waaweyn"
Isagoo tusaale siinaya taariikhda maraakiibta ee Istanbul khudbadiisa, İmamoğlu wuxuu carabka ku adkeeyay inuu u mahadcelinayo qof kasta oo ilaa hada ka soo shaqeeyey Markabka Haliç İmamoğlu wuxuu yidhi, ucu Natiijooyinka soosaarka halkan ka jira; Shirkadda waxay gaartay awoodooda in ka badan 18 milyan oo rakaab ah oo ay kujirto Hayriye. Tiradaan waxay muujineysaa in gaadiidka bada markasta muhiim u ahaa Istanbul. ” Isagoo ku sifeeyay Bosphorus inuu yahay mid ka mid ah barakooyinka adduunka ugu weyn, İmamoğlu wuxuu yidhi, "Bosphorus kuma aysan soo kordhin kaliya quruxda dabiiciga ah iyo juqraafi ahaan Istanbul, laakiin waxay kaloo ku dartay qiimaha weyn safarka badda. Xitaa ka dib markii buundooyinka la dhisay, ilaa 2000, gaadiidka badda ayaa leh saami muuqata oo ku saabsan gaadiidka magaalada, 10 boqolkiiba. Maanta, heerka wuxuu u hooseeyaa 4 boqolkiiba. Sidaas darteed, maanta, celcelis ahaan, qiyaastii 800 oo kun oo muwaadiniinteenna ah ayaa doorbida inay ku safraan badda. Waxaan dhihi karaa ma jirin wax horumar ah oo ka socda aaggan 25 sano, laakiin waxaa jiray hoos u dhac. Hadda waxaan samaynay bartilmaameedkeenna ah inaan gaarno boqolkiiba 10 mar labaad, hore ayaan u soconnaa. ”
“GAADIIDKA MASS waa in la khaarijiyaa”
Imamoğlu wuxuu cadeeyay in adeegsiga gaadiidku uusan ku filneyn magaalada Istanbul halkaas oo gaadiid culus uu ka jiro. “Karaköy Tunnel, oo ah mid kamid ah wadooyinka ugu horeeya ee dunidan, ayaa laga hirgalin doonaa magaaladan; laakiin dhinaca kale, ma awoodi doonno inaan gaarno shabakad tareenka dhulka hoostiisa ah oo gaari doonta 16 milyan oo qof. Dabcan, dayacaadda iyo beero-xumada ayaa saameyn weyn ku leh gaarista meeshaas. Laakiin tan ugu muhiimsan, haddii bini-aadamka la siiyo mudnaanta halkii laga isticmaali lahaa baabuurta, waxaan ahaan lahayn heer aad u sarreeya oo gaadiidka dadweynaha ah. ” "Maanta waxaan isku dayeynaa inaan dhisno deg deg, isku halleyn ah, raaxo leh, rakhiis ah iyo nidaam gaadiid dadweyne oo la heli karo, İm İmamoğlu ayaa yiri." Waxaan aaminsanahay in mashaariicda gaadiidku ay ugu horreyn u jeedinayaan wanaajinta xaaladaha kooxaha dakhli ee ugu hooseeya bulshada. Qaabka arrintan loo sameeyo waa iyada oo loo maro gaadiidka dadweynaha iyo dhexgalka nidaamka oo dhan. Baska, metro, taraamka iyo gaadiidka badda waa in lagu dhex daraa qaab ballaaran. Waa inaan fulinaa dhammaan habraacyada lagama maarmaanka u ah inaan sida ugu dhaqsaha badan u sameyno kuwan
I Waxaan Diiday FARSAMADA CHANNEL ISTANBUL AN
“Arrinta Channel Istanbul sidoo kale waa in laga wada hadlaa, ayuu yiri İmamoğlu,“ waxaan ku idhi eray baarlamaanka dhexdiisa. 'Muwaadin ahaan Ekrem Imamoglu, oo aabe u ah 3 caruur ah, ma doonayo in la igu soo rogo Channel Istanbul si kasta, waxaan iri. Tani waa muhiim. Mawduuca aan ka hadlaynaa waa mowduuc u qaadaya Istanbul meel kale oo gabi ahaanba beddeli doona. Sidaa darteed, hufnaanta, daruuriga muwaadiniinta reer Istanbul waa inay si buuxda uga wada hadlaan. Waxaan arkay in mashruuca, oo horey loogu dhigay balanqaad doorasho sanadkii 2011, lagana wada hadlin kamana furna dadweynaha. Bal eeg, kani waa wax lagu qasbay. Waxaan ahay qof ganacsato ah, qiyaaseygu waa xoog badan yahay. Uma maleynayo inay tahay 75 bilyan, waxay ka badan tahay maalgashiyadan. Toddobaadka ugu horreeya ee Janaayo waxaa lagu qaban doonaa 'Kanal Istanbul Workshop'. Tallaabo kasta oo aad ku qaadatid Istanbul waa in si wanaagsan loogu xasuustaa. Waxaan u maleynayaa in juqraafi ee Istanbul uusan u adkeysan karin isbedel noocaas ah. Waxay leedahay asbaabo cilmiyaysan ..
“Kani MA AHA SIYAASAD SIYAASAD”
Imamoglu wuxuu ka digay in 135 8 milyan mitir murabac dhul beereed kaligiis uu xaq yahay "saameynta Marmara ay ku leedahay Badda Madoow ... Xaaladda 8 milyan oo qof oo ku nool jasiirad… Maxaa? Waxaad ku xireysaa 300 350-90 mitir buundooyin dhaadheer. Waa maxay sababta? Waxaa la yiri; kororka taraafikada markabka, kororka cabirka markabka taas oo ay ugu wacan tahay koboc farsamada iyo ka hortagga maraakiibta maraakiibta sidda walxaha khatarta ah sida shidaalka oo loo maro Bosphorus. Ma fiirin kartaa sababta? Boqolkiiba 10 waa mid aan shaqeynaynin. Tirada maraakiibta maraya Bosphorus ayaa sii yaraanaya. Iyada oo laga cudurdaaranayo biyahan, oo ay ku burburiyeen juqraafi 1-sano jir ah oo leh wax sidan oo kale ah, waxay ina hor yimaadeen iyaga oo aan akhriyin warbixinta EIA, dad gaaraya 150 milyan 1,5 kun ayaa loo abuuray agagaarka kanaalka. Ma ogtahay, booyadaha, maraakiibta? Mashruuc kiro oo cusub? Qodista ku dhowaad 2 bilyan cubic mitir, XNUMX bilyan cubic mitir marka loo eego qolalka. Number of maraakiibta gudbaya Cidhiidhi ee Istanbul, Turkey hoos. Wuxuu ka hadlayaa halista booyadaha. Way iska cadahay sida maalgashiyada muhiimka ah loogu sameeyo dhuumaha shidaalka. Maalgelinno kala duwan ayaa la samayn karaa ”.
“Meeshani waa nimcada Ilaah”
Imamoglu wuxuu sheegay in juqraafiga quruxda badan ee 10 kun oo sano la isku dayay in lagu khafiifiyo iyada oo cudurdaar laga helayo biyaha wuxuuna yiri: göre Sida lagu sheegay warbixinta EIA, waxay nooga hor yimaadeen iyagoo aan aqrin. Ma odhanayo, Wasaaradda Dadweynaha iyo Magaalada ayaa leh. 1 milyan 150 kun oo dad ah ayaa lagamagacayaa hareeraha kanaalka. Waad ogtahay waxaan dhahnay 1 milyan 150 kun, taasi waxay noqon laheyd 2 milyan. Si fiican ayaad u ogtahay. Muxuu yahay mashruucu markaa? Booyadaha, maraakiibta. Marka kani waa mashruuc kiro oo cusub? 1,5 bilyan mitir cubic mitir oo qoditaan ah, marka loo eego qolalka - 2 bilyan waxa lagu buuxin doono Badda Madow. Waxaan ku tusi doonaa mashaariicdooda bisha Janaayo. Ma taqaanaa waxa ugu horreeyay? Waxay ahayd mashruuca 3 jasiiradood oo ku yaal Marmara. Ka qodista halkaas, Bakirkoy, Avcilar waxaa lagu dhisi doonaa jasiiradaha Büyükçekmece 3 hortiisa. Miyaan wax intaas ka badan kuu sheegayaa? BİMTAŞ waxay ku jirtaa shirkaddeena. Mashaariicda ayaa la bartay, tuulooyinka ayaa la saaray jasiiradan, waxaana mashaariicda lala sameeyay tuulooyinkaas lagu soo bandhigay laguna soo bandhigay carwooyinka guryaha reer Yurub iyo carwooyinka caalamiga ah ee guryaha. Waa maxay? Waxaan ku iibin doonnaa tuulooyinkaas jasiiraddan 2-3 milyan oo doolar. Eeg baahida loo qabo Istanbul. Hagaag, ninkan wuxuu ku sameyn karayay Dubai. Cidlada, lamadegaanka! Can. Tani waa duco ka timid xagga Ilaah. Ha taaban, annagu ma taabanno. Wax sidaas oo kale ahi ma jiraan. Waxaan ka hadlaynaa farxadda dadka. Weligey noloshayda Ibliis carrab la 'kumaan noqon. Waxaan ka hadlaynaa, bro. Sayniska ayaa igu qancin doona sabab. Hal qof ayaa iga dhaadhicin kara, bro. Sayniska iyo caqliga ayaa iga qancin doona. Ma doonayo inaan daba galo wax kastoo sayniska iyo sababtu aysan qancin. Qarankayagu ma tagi doono. U hoggaansanaanta caqliga iyo sayniska ayaan kaa sooci doonin wadada saxda ah. Laakiin haddii aad qof raacdid, qofkaasi meel ayuu kuu geyn karaa. Aadanaha, waxaan ula jeedaa, waan ku lug leeyahay, oo kujiro qof kale. Marka taa la eego, kani maahan arin siyaasadeed. Tani maahan arin maxaa yeelay qof ayaa codsaday. Sababta oo ah in qof uusan dooneynin arintu maahan arin. Tani waa shaqada caqliga iyo sayniska. ”
Macaamiisha Istanbul ee Shaqaalaha Guriyeynta Ka Qayb Galaya Guriyeynta Istanbul
İstanbul Bursa İzmir Mashruuca Wadada Wadnaha Fidisay
Aqoon-isweydaarsiga Maraakiibta ee Istanbul
Shabakada Isgaadhsiinta ee Istanbul
Mashruucyada Gaadiidka ee Istanbul
Mashruuca Dhismaha Kanal İstanbul Mi